トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Izinto eziluncedo kunye ezingeloncedo olujikelezayo ikhadi lamatyala credit-kuphela
EJapan, kukho umkhwa ukuba ngetyala olujikelezayo ngokwawo akukho yayize. Abantu abaninzi umfanekiso olujikelezayo ngetyala ematyaleni alinganayo, umzekelo, eUnited States lidla olujikelezayo Ithetha credit lwekhadi ityala, ngokuba yaseJapan kukho ingqiqo ukungawi abathengi, kukho imeko ayikho lula ugxile.
ilungelo kaninzi ngenxa yokuba izibonelelo
, inkampani ikhadi lamatyala ikhupha ityala-kuphela olujikelezayo card, kwaye inikezela ezininzi zoncedo nenzuzo barhumela, sisebenzela ukuba ukusasaza. Ukuqonda lo mfana, uye wakhupha ikhadi elisebenzisa umlinganiswa animation umdlalo Popular ngamandla. La makhadi okanye uyilo okunye, kuba izinto ezikhethekileyo kuphela xa ikhadi ezikhutshiweyo okanye ekhoyo, iye ngokuya ithandwa phakathi midlalo.
Ukongeza, i-credit olujikelezayo kuphela ngecredit card, iye yafakwa inani izibonelelo ukuze ukusasaza inkampani ngetyala. Ngokomzekelo, siye ndandise lokunciphisa umlinganiselo amanqaku ukuya ngexesha lokusetyenziswa ikhadi. Normal lizinga point ngu 0. Emelene% 5, kukho ikhadi-1% kuphela umlinganiselo zokunciphisa olujikelezayo ngetyala-kuphela card. Kuya kuba loo ezininzi izinga ekunciphiseni. Ngaphezu koko, kuye impatho engcono ngokwemiqathango intlawulo yonyaka, axabisa loo intlawulo yonyaka ikhadi njengesiqhelo, okanye nikhululwe.
Kuxhomekeke kuninzi kwabo zobu- ukuhamba phesheya inshorensi ingozi kunye inshorensi evenkileni, uhambelana, ezifana ikhadi zodidi. Le nkampani credit, kwaye ndinethemba ukuba uya kuba uluntu samatyala uhlobo American, sisebenzela ukufumana abathengi kudityaniswe iqela lokuxhamla okunjalo.
Ububi na imali umdla iphezulu zithande ukuba abonise abazinikeleyo card
ribonucleic letyala kwi credit olujikelezayo badla demerit ibekwe ngendlela yaso. Umzekelo, oku kukuba ngenxa yokuba imali kuphela ethile ngenyanga imali ithathwa, ngaphantsi kusenokwenzeka ukuba ingqondo ukuba namatyala. Oko kunokubangela isixa esikhulu yokuthenga kunokuba kukwazi ukuhlawula imali, xa ityala akuyi kuncitshiswa nasemva ukuya kutsho, badla ukuba into yokuba nje kuthatyathwa kuphela umdla enyanisweni umdla.
Nakaniwa, kukho kwakhona ityala eziwa ematyaleni ezininzi olujikelezayo ngetyala, kukuba ukusebenzisa isilumkiso. Uninzi inkampani yamatyala, iye ukuphuhlisa Internet kweenkonzo ukuze sibonwe kwimbali ukusetyenziswa lobuqu kubathengi, kuyimfuneko ukuba uye ukusetyenziswa kakuhle lo gama ngokujonga iimbotyi.
for olujikelezayo ngetyala-kuphela ikhadi kukuba kukho ezininzi izibonelelo kunye neenkonzo ezincedisayo, kodwa nomtsalane, ngenxa yokuba kukho kwakhona ityala, simele siqhubeke ukuhlawula inzala. Ngokomzekelo, xa sithenga iseti ku 90.000 yen nyanga 10,000 yen lokuhlawula olujikelezayo ngetyala nganye, ndozizalisa amaxesha 10 kubandakanywa inzala, umdibaniso inzala iya kuba ngaphezu kwe-6000 yen. Kwizavenge amathathu 90.000 yen, inzala kangangoko 2200 yen, uya kuzalelwa malunga izihlandlo ezithathu umahluko.
reference | ubalo ndlela olujikelezayo ngetyala, Ukulinganisa
reference | ajikelezayo credit Ukuba ingozi
kuqala inikwa kwintlawulo loo umdla ukuba ilinxuwa, kukho indlela yokuba elibekwe ukwandisa mali esiyintlawulo enyangeni. Umzekelo, ukuba icwangciselwe kwi-200,000 ngoku 300,000 ngoku, ukuba okomzuzu evenkileni eqhelekileyo, phantse akaguquguquki ikhadi lamatyala elandelayo kwinyanga 1 xesha ke kuhlawulwa ngalo.
Ukongeza, kuninzi credit olujikelezayo elizinikeleyo ngecredit card, unako ukuba isixa semali eseleyo ziyafumaneka kwi-intanethi le nkqubo.
reference | intlawulo bulk, isixa-mali ukuhlawula olujikelezayo ngetyala kunokwenzeka?